Samsung nzvimbo yekutengesa haina kunaka sezvazvaive mumazuva ekutanga e Android. Zvakanaka kutengesa kwakashata ye Samsung Galaxy S9 uye iyo Samsung Galaxy S10 inoteedzera yakakonzera kukambani yakatarisana nemakwikwi akakomba pamatengo ese emusika weiyo smartphone. Iko kambani inonyanya kukosha-nzvimbo nzvimbo haisisiri yakanyanya kutonga. The Samsung Galaxy S7 inoramba iri yekambani inonyanya kutengesa yeGlass S nhepfenyuro yakakura. Nekudaro, mukufamba kwa2019, Samsung isina kubatsirwa kubva mukuremara kweHuawei's International smartphone bhizinesi nekuda kwekuvandudza kwezvematongerwo enyika, saga iro richiripo nanhasi. Muna 2020, kambani ikozvino ndiyo inofungidzirwa kusarudzika musarudzo yekutanga mumusika weApple smartphone, sezvo imwe yemakwikwi ichiri imwe nzira kumashure maererano nemusika wekugovera, pfungwa yekugovana, uye kuwanikwa kwepasi rese kwemidziyo.
Iyo kambani inogona kukwidziridza inotungamira pamwe neiyo itsva Samsung Galaxy S20 nhevedzano?
Samsung zvirokwazvo yakabatsira zvakanyanya mukutenderera kweGlass S. Gore rino, iyo Galaxy S20 Ultra ndiyo Samsung yepamusoro-yekupedzisira mureza, asi ine yakaenzana stratospheric mutengo tag kuti uenzane. Iyo inomiririra yakawanda firsts ye Samsung. Iyo Galaxy S20 + uye yakajairwa Galaxy S20, kune rimwe divi, inoshanda sevakabudirira veGore S10 + neGirazi S10 zvakateerana. Iyo diki Galaxy S10e (ongorora) haina kuwana mutengo wakanangana uyu unoteedzera gore rino, kunyange iyo Galaxy S10 Lite (ongorora) inotora yakafanana "yakachipa mureza" basa. Nhasi, isu tiri kuongorora iyo yepakati sarudzo, iyo Galaxy S20 +.
Iyo Galaxy S20 + haina 108MP yekutanga kamera ine nona binning, uye zvakare inoputika pane inozivikanwa 48MP periscope telephoto kamera ine 4x Optical Zoom. Nekudaro, iyo yakasarudzika marondedzero ayo akafanana neGirazi S20 Ultra kunze kweiyo saizi yekuratidza uye huwandu hwebhatiri. Mumisika yakawanda, iri zvakare kudhura zvakanyanya. MuIndia, semuenzaniso, musiyano wemutengo wakakosha ₹ 19,000 ($ 253), iyo ine mhedzisiro yekugadzira iyo Galaxy S20 +, uye kwete iyo Galaxy S20 Ultra, iyo yakajairwa-inova anotungamira mureza wefoni dzepamhepo.
Iyo Galaxy S20 + inogona kurarama maererano nebasa rayo rakakura here? Zvine musoro here kushandisa kaviri huwandu hwemari kuenderana nemhando dzakasiyana dzinodhura mumusika? Ndeapi mutsauko wekuita pakati peExynos uye Snapdragon vari akasiyana gore rino? Iyo Galaxy S20 + zvirokwazvo ine zvakawanda zvekuverengesa, saka ngatione kuti zvinoita sei.
Zviyero + Kurema
North America / China / South Korea / Latin America: Qualcomm Snapdragon 865
Kuzorora Kwenyika: Exynos 990
120Hz paFHD +
chibatiso Ultrasonic pasi-inoratidza chigunwe chekunzwa
4K 60fps vhidhiyo
12MP Wide, 79 °, f / 1.8
12MP Ultra-yakafara, 120 °, f / 2.2
64MP Yechipiri Wide, 76 °, f / 2.0
Micro SD kusvika ku 1TB
25W Super Kurumidza Kuchaira
Fast Wireless Kuchaja 2.0
Water Nemishonga IP68
Software Shanduro Android 10 ine Imwe UI 2.1
5G zvakasiyana: NSA, Sub-6, mmWave
4G akasiyana: LTE mabhendi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66
Wi-Fi: 802.11 a / b / g / n / ax 2.4GHz + 5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM, 1.2Gbps pasi / kumusoro
Nzvimbo: GPS, Galileo, Girazi, BeiDou
Vatauri veStereo uye nenzeve zvinonzwika ne AKG
Yakapoteredza inzwi neDolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus yakaiswa)
mavara Cosmic Grey, cosmic dema, Cloud bluu
Kutanga Mutengo US: $ 1,199 / India: ₹ 73,999
Kuratidzwa mhando kwakanaka senge kamwechete pane Samsung mureza, uye sarudzo yeGoogleHz yekuvandudza mwero inoita mutsauko mukuru
Kwakanakisa kamera kuita mukuwanda kwemasikati uye kwekunze zvakaderera mwenje mamiriro
Great in-ruoko kunzwa uye ergonomics
Imwe UI 2.1 ndeimwe yeyakagadzirirwa-mushe mushe mushandisi nzira
Iyo Exynos 990 SoC yakavandudza real-world performance ichienzaniswa neyavakatangira
Kwete 3.5mm musoro wefoni jack; hapana 3.5mm kune USB Type-C adapta yakapihwa mubhokisi
Yakadzama kuchengetwa uye yakajeka mufananidzo mhando nyaya ane kumeso kumeso; inononoka kuvhara muchiedza chakadzika
Hupenyu hwebhateri pane 120Hz modhi yakaderera pane iyo 60Hz maitiro, uye haina kunaka
The Exynos 990 variant ine yakaderera mashandiro uye kugona zvichienzaniswa Snapdragon 865 variant
Nezve ongororo iyi: Samsung India yakanditumira yunifomu yekuongorora yeiyo Indian 4G 8GB RAM / 128GB yekuchengetedza yakasiyana yeGPS S20 + (SM-G985F). Maonero ese mune ino ongororo ndeangu. Ongororo iyi yakaburitswa mushure memwedzi wekushandiswa. Max weinbach yakapa mabhenji eiyo Snapdragon 865 variant yeiyo US Galaxy S20 +.
Samsung Galaxy S20 + XDA Foramu|| Tenga iyo Samsung Galaxy S20 + paAmazon.in
Samsung Galaxy S20 + - Dhizaini
Dhizaini yeiyo Samsung Galaxy S20 + ndeimwe yeakanakisa mureza mafoni kumusika. Panguva imwecheteyo, pane matanho akati wandei angave akatorwa kuti unatsiridze.
Kutanga nemhando yekuvaka, iyo Galaxy S20 + ine yakajairwa yesimbi-uye-girazi sandwich dhizaini. Iyo ine aluminium chimiro uye girazi kumashure ine glossy kupedzisa. Chimiro chealuminium chakanyanya kutetepa kupfuura mafoni mazhinji ari pamusika, negirazi rakatemerwa kubva kumberi nekumashure. Zvakafanana ne Galaxy S10 5G mune izvi, uye izvi imo nekuti iyo 5G kusiyanisa kweGreen S20 + inofanirwa kuve neyakaonda yakatetepa kuti ikwanise mmWave 5G radio frequency, iyo yakavharwa nesimbi uye inobvumidzwa kuburikidza negirazi. Iyo 4G kusiyanisa kwefoni haina zvipinganidzo zvakafanana sezvo isingatsigire pamwe mmWave kana sub-6GHz 5G, asi iwo maviri akasiyana ane akafanana dhizaini. Izvi zvinoreva kuti foni haina kusimba pane kukwikwidza mafoni nemakwikwi egirazi kumashure. Iko kushoma kwazvo aluminium inowanikwa pano, iyo inowedzera mikana yekuparadza kwakashata pane kudonha. Nehurombo, ndizvo zvazviri.
Iko kubhururuka kwekunzwa kwegirazi kumashure zvakare kune kupokana kwakashata. Vakwikwidzi vatengesi vakadai se OnePlus, OPPO, Realme, uye vamwe vakaedza kana mune dzimwe nguva kuenda zvizere nematte girazi kupedzisa, izvo zvinonzwika zvakanyanya kudhonzwa paruoko apo ivo vanofungidzira kutonhora kunzwa kwealuminium. Kupedzisa matte kunotungamirirawo kune zvigunwe zvishoma. Samsung, kune rumwe rutivi, yakaomesa musoro nekuomerera kupera pamafoni ayo emireza. Izvi zvinoreva kuti Galaxy S20 + haina inonzwika kusiyanisa musina ruoko (zvine chekuita nekunzwa) pane mafoni anodhura chikamu chimwe chete chemutengo. Zvingave zvakanaka kuti uone iyo kambani ichienda nematte girazi mune ramangwana.
Iyo Galaxy S20 + ine yakachena kumberi dhizaini. Chiyero-kune-muviri chiyero chinokwezva 90.5%, iyo yakanaka seinowana mafoni asina michina popup yekumberi kamera. Iwo mabheringi anotaridzika kuonda zvishoma pane ayo eGirazi S10 +, uye akafanana akafanana neiyoGeneral Note 10+ (ongorora. Foni ine yakarerekesa nzeve munzeve pamusoro, inogonesa vanotaura stereo. Iyo gomba punch 10MP yekumberi kamera inoiswa panzvimbo pakati padyo nepamusoro kamera. Izvi zvinoreva kuti ayo aesthetics ari zvikuru yakanaka kupfuura iyo Galaxy S10 + s piritsi-dhirii yepamberi kamera cutout, kana kunyange iyo Galaxy S10e iri kurudyi-yakaiswa mugomba-punch pamberi kamera. Zvakare zvirinani kune usability sezvo chimiro cheki icons chisingasundirwe kudivi.
Iwo bhatani mabhatani uye bhatani rekona (inoshandiswa Bixby nekukasira, asi iwe unoichinja kuti ive nayo unenge sebhatani remagetsi) ari maviri akaiswa kurudyi ruoko. Simba rekusimba uye kuomarara kwemabhatani kwakanaka, uye kuiswa kwavo kwakanakawo. Hapana kana chinhu kuruboshwe. Iyo yepamusoro ine iyo hybrid dual nano-SIM tray (mbiri nano-SIM kana nano-SIM + microSD) uye maikorofoni. Pazasi pane imwe maikorofoni, USB Type-C (USB 3.2) doko, uye yepasi mutauri grille. Nehurombo, hapana 3.5mm musoro wefoni jack muGland S20 yakatevedzana.
Iyo Galaxy S20 + ine yakarongedzwa kuratidzwa, asi iyo yekumusoro yechiratidziro ishoma kwazvo kutemwa kupfuura zvazvaive muzvizvarwa zvakapfuura. Izvi zvinoreva kuti hazvisi kuvhiringidza, uye zvakare zvinopa zvimwe zvinoonekwa zvechisimba dzimba. Iyo foni zvakare ine yakatenderera makona, inovandudza zvakanyanya mukati-ruoko kunzwa. Kumashure, isu tine rectangular kamera yakavharira kumusoro kuruboshwe iyo ine quad kamera (12MP + 12MP + 64MP + ToF sensor), pamwe ne LED flash. Iwo ma sensors anoiswa asymmetrically mukati mekuvharira, iri diki dhizaini risina kunaka. Zvakare zvakare, inotaridzika kushomeka kupfuura yakadzoserwa kamera gadziriso yeiyo yakajairwa S20 uye ine humongous "100x Space Zoom" kamera yakavharirwa pane iyo Galaxy S20 Ultra. Hapana kana chimwe chinhu kumusana kunze kweiyo standard Samsung logo.
Iyo Galaxy S20 + inouya mumavara matatu mumatunhu mazhinji: Cosmic Grey, cosmic Black, uye Cloud Blue. Iwo mavara akanaka, kunyange kune Cloud Blue ruvara. Iwo kubva kukuru kubva kuGirl S10 inonakidza prism mavara. Wese matatu mavara ari understated, zvinoreva kuti havangabude pachena. Sezvandambotaura, izvi zvinogona kuve chinhu chakanaka kana chinhu chakashata zvichienderana nesarudzo dzevatengi. Ini pachangu ndaive fan weGreen S10e's Prism White color kupedzisa, yakachinja pakati peblue bhuruu nechena zvichienderana nekupenya kwemwenje. Hapana imwe yeiyo Galaxy S20 mavara ane maitiro ePhrism. Ndawana iyo cosmic Grey chinja kuti iongororwe, uye nepo ndichifunga kuti ruvara irwo shanduko inozorodza mugungwa remafoni anopenya, inogona kutaridzika ichitenderedza kune vazhinji vashandisi. Samsung yakakanganisa zvishoma chiyero pano. Mamwe matunhu akadai seBest Buy muUS uye South Korea anowana akati wandei mavara senge Aura Blue, asi ari mudunhu. Mifananidzo yeAura Blue variant inogona kuoneka pazasi, nekuda kweMax.
Iyo ergonomics yeGirazi S20 + zvinoshamisa kwazvo. Ivo vari nani pane iyo Gadziriso yeLaptop 10 Lite (ongorora) nekuda kweiyo foni iri diki. Iyo 186 gramu uremu uye hurefu hwe 7.8 mm inoenda kure nzira yekuita kuti foni isanzwikwa mune ruoko. Kugovera uremu kwakakura, uye kunyangwe foni iri refu kwazvo kuti ishandiswe neruoko rumwe, inogona kushandiswa kwenguva yakareba pasina maoko ako aneta. Kuratidzwa kwakakomberedzwa, makona anotenderedzwa, uye yakatenderedzwa kumashure ese mapepa pano, uye iyo yakazara-mukati kunzwa kwefoni kwakanaka.
Kuratidzwa kwakakomberedzwa, makona anotenderedzwa, uye yakatenderedzwa kumashure ese mapepa pano, uye iyo yakazara-mukati kunzwa kwefoni kwakanaka.
Iyo bhokisi bhokisi reGirazi S20 + rine 25W USB C-PD 3.0 "Super Fast Charger" ine PPS uye PDO, USB Type-C kune Type-C tambo, USB Type-C mhete yakaiswa neAKG, uye pachena purasitiki kesi . Zvinoshungurudza kuona Samsung ichisvetuka pakupa Type-C kune Type-A tambo kunyange yefoni yakadhura kudaro. Iyo kambani yakakodzera chikwereti chekubatanidza nhare panguva iyo vatengesi vazhinji vanosarudza kusazvisunga. Nekudaro, hapana 3.5mm kuenda ku USB Type-C adapta mubhokisi, sezvakaitwa neGlass Note 10+. Zvekare, hazvingadhuri Samsung yakawanda kubatanidza zvinhu zviviri izvi mubhokisi kuti vashandisi zvive nyore.
Pakazara, iyo Galaxy S20 +'s dhizaini yakanaka, asi haisi kusundira miganhu kumberi nenzira huru. Kupedzisa girazi rematte kwaigona kunge kwakaenda kure kuenda kuita kuti mudziyo unzwe zvakanyanya mumusoro, kunyangwe iwo muputi uye kupera uchiripo une hunyanzvi. IP68 yakasimbiswa kudzivirirwa kwemvura ndiyo yekuwedzera nzvimbo iyo inodhura yakawanda magaidhi haana, uye Samsung yakave yakafukidzwa kwemakore mana ikozvino. Iyo aesthetics yeiyo yakakomberedzwa gomba-punch kamera ndeyekuvandudza kukuru pamusoro pechizvarwa chekupedzisira, iyo yakaonda bezels inoratidza inobatsira pakudzikisa vhezheni yejekiseni, uye ergonomics iri, inotaura zvine musoro, isina parutivi pamusika wepuraimendi we-smartphone.
Samsung Galaxy S20 + - Ratidza
Iyo Samsung Galaxy S20 + ine 6.7-inch Quad HD + (3200 × 1440) Dynamic AMOLED kuratidzwa ine 20: 9 chimiro chiyero uye 525 PPI. Iyo ine inosarudzika 120Hz yekumutsiridza mwero (HFR), iyo inogona kungobvumidzwa paZere HD + (2400 × 1440) resolution. Samsung inonzi iri kushanda pane imwe update kugonesa 120Hz kuQuad HD +, asi ikozvino, vashandisi vanogona kuve ne 120Hz ku Full HD + kana 60Hz kuQuad HD +. The OPPO Tsvaga X2 yakatevedzana ine 120Hz kuQuad HD +, saka Samsung iri kumashure pano. Nhare dzinoendesa ne60Hz kuzorodza mwero paKazara HD + kugadziriswa kunze kwebhokisi. Izvo zvinoratidzwa zviyero ndezve 155 mm x 70 mm. Iyo epurasitiki inobvisa skrini inodzivirira ndeyefekitori-inoshandiswa pachiratidziro.
Iyo Dynamic AMOLED nomenclature zvinoreva iyo inoratidza inotsigira HDR10 +. Izvo zvinoreva zvakare kuratidzwa iOLED iyo inoderedza huwandu hweruvara rwebhuruu mukati meiyo inokuvadza dhiza kuneta kwemaziso. Izvi zvinowanikwa nekuchinjisa hwindo rebhuruu OLED zvishoma kumusoro kumusoro kuonekera kunoonekwa. Hunhu hwekutsigira iyi hwakatanga kuve chikamu cheGalaxy S10 / Galaxy Cherechedzo 10, uye iko zvino kwaita nzira yekuratidzwa kweGPS S20.
Panyaya yekugadziriswa, Samsung iri kuchengetedza nekuratidzira kuratidzira iine Full HD + resolution kunze kwebhokisi, sekufanana kwave kuita kubvira Samsung Galaxy S8. Izvi zvishoma-zvakaringana maererano nekupinza kwemifananidzo, kunyangwe zvinogamuchirika. Pane musiyano unooneka wekujekesa kana iwe uchigonesa WQHD + resolution. Nekudaro, izvo hazvishande nehuwandu hwepazororo re 120Hz. Parizvino, kubvumirana kwakawanda ndekwekuti 120Hz paZere HD + iri nani kutengeserana kuri nani pane 60Hz QHD +. Zvinosemesa kutaura kuti iyo Galaxy S20 + ine 120Hz QHD + kuratidza; sezvo zvese zviri zviviri zvisingagoni kuiswa panguva imwe chete. Kugonesa 120Hz kuQHD + hazvigoneke mumuviri izvozvi.
Ini ndinosiya iyo yakazara ratidziro yekuongorora Dylan, asi zvandinofungidzira zveGreen S20 kupenya kwakakura. Zvekare, kupenya kwemanyoro kuri kuiswa kune yakachengetedzeka kusvika pamazamu mazana matatu nemashanu. Yakakwirisa Mheni Yakakwirisa (HBM) pakubatidza kwezuva inogona kutora iyo kuratidza kune ~ 350 nits ine auto-kupenya inogoneswa, zvinoreva kuti mwenje wezuva wakanaka. Iwe hausi kuzove nenyaya yekuona zviri mukati kunyangwe zuva rakatwasuka. Iyo yekutarisa makona yakanakawo, isina muraraungu kunze kwekukanganisa maitiro uye mashoma angular colour changet pakona shanduko. Misiyano yacho ndeyokusingaperi.
Panyaya yekujeka kwemavara, iyo Galaxy S20 + inondisiya nemafungiro akanaka. Iwo ekuratidzira ngarava neRudzi rwemhando maitiro akagonesa kunze kwebhokisi, neV pachena mode ichiwanikwa senzira. Maitiro echisikigo achiri akaganhurirwa zvakare anodziya, ayo anoramba ari asina kusimba pfungwa. Ruvara kurongeka zvine chekuita nesRGB uye DCI-P3 mavara gamuts ndeye perceptibly akanaka kwazvo, uye otomatiki ruvara rutsigiro rutsigiro zvinoreva kuti WCG gamut mapikicha anotsigirwa muGoogle Mapikicha uye Samsung Garari. Nyaya dzakasara idzi idiki. Panyaya yekuda kutema, Samsung yakazogadzirisa kugona kwekuratidzira kusiyanisa pakati pemumvuri wakasviba. Izvo hazvisati zviri parutivi ne iPhone, asi iyo gomba iri kuswedera.
Simba kushanda-huchenjeri, pane nyaya hombe nesarudzo yekusarudzika ye 120Hz yekuratidza kwefoni. As AnandTech inotsanangura, haisi kungoita seyakagwinya sezvo hupenyu hwebhatiri hune maitiro ane 120Hz hwakakosha. Iyo inoratidzira inoita kunge isiri kuita kwechokwadi kwekuchinja kwekudzoreka mwero (VRR); iyo 120Hz maitiro anoshandisa 120Hz kuzorodza mwero nguva yose. Iyo pani pachayo inotsigira mana zororo zororo: 48Hz, 60Hz, 96Hz, uye 120Hz. Samsung nehungwaru yakagadzira 60Hz modhi ndeye kusarudzika, asi sezvazviri, 120Hz inouya nemutengo mukuru wemagetsi. Iyo kambani iri kushandisa imwechete MIPI interface, asi matambudziko anoita seakadzika. Vashandisi vacharasikirwa kana imwechete yevhavha-yenguva kana ivo vanochengeta 120Hz modhi yakagoneswa, zvinoenderana nekubvumirana kwese uye ruzivo rwangu zvakare.
Pakazara, iyo Galaxy S20 + 's kuratidzwa kwakanaka sekusvika kwayo mumwaka wepakutanga weApple smartphone.
Pakazara, iyo Galaxy S20 + 's kuratidzwa kwakanaka sekusvika kwayo mumwaka wepakutanga weApple smartphone. Kugadziriswa kweSamsung kweiyo yepamusoro sosi yekuzorodza inosiya yakawanda kuve inodiwa kusvika pari zvino, asi zvinogoneka kuti iko kushanda kwesimba kunogona kuvandudzwa nekudzokerwa kwemangwana. Panyaya yemhando yekuratidza, kusiyana pakati peSamsung nevakwikwidzi vayo kuri kuvhara zvishoma, zvinoreva kuti mafoni ane makuru ekuratidzira anogona kutengwa nemitengo isingadhuri.
Samsung Galaxy S20 + - Performance
Iyo Samsung Galaxy S20 yakatevedzana inofambiswa ne Samsung System LSI's Exynos 990 SoC mumisika yakawanda yepasi rese, nepo iyo Qualcomm Snapdragon 865 ichingo bvumidzwa kune iyo US / Canada / South Korea / China / Latin America akasiyana emafoni. Iwo maIndia akasiyana anoratidza Exynos 990 SoC, sezvinotarisirwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Qualcomm Snapdragon 865, tarisa yedu yekutanga nyaya naizvozvowo mabhenji edu enzaniso pakati peSnapdragon 855 neHiSilicon Kirin 990. Tichiri kuongorora maitiro ayo pafoni yekutengesa, saka Snapdragon 865 Galaxy S20 + ichava mukana wedu wekutanga kuti uone maitiro eSoC munyika chaiyo.
Iyo Exynos 990, kune rumwe rutivi, inotarisirwa kuve shure kweSnapdragon 865 kubva pakutanga chaiko. Kubva makore mashoma apfuura, Exynos SoCs haina kukwanisa kukwikwidza neanokwikwidza Snapdragon SoCs echizvarwa. Iyo gap yaive yakanyanya kuwanda muna 2018's Exynos 9810, yaive kure kure nekuitwa kweQualcomm Snapdragon 845. Gore rapfuura Exynos 9820 raive rakaoma-nani kuedza, asi ichiri kutadza kuenderana neanokwikwidza Qualcomm Snapdragon 855. Iyo Exynos 9825, inoratidzwa muGlass Note 10, yakanga isiri chinhu asi 7nm kuderera kweExynos 9820, sezvo yaive neCPU imwechete neGPU kuitawo. Kuita kuti zvinhu zvinyanye kuoma, Samsung tsika yepakati pekuedza, iyo yakatanga neyakaitwa 2016's Exynos M1-powered Exynos 8890, yave kusvika kumagumo. Vashandi 290 vasiya Samsung's Austin Research Center (SARC), uye chirongwa cheCPU ipapo chapera. Chikwata ichi chaive nebasa rekugadzira Samsung macustoms chaiwo, kutanga neExynos M1 (Mongoose) muExynos 8890 uye vachipedza nzira yese kuenda kuEexynos M5 muExynos 990.
Gore rinouya, Samsung icha, saka, inofanirwa kuchinjisa kumaArM's stock cores, zvakanyanya seQualcomm uye HiSilicon. Yayo tsika yepakati zano haina kushanda sezvo musimboti magadzirirwo aive akaderera ese ari maviri mukati mekuita uye kugona achienzaniswa nemhinduro dzeMARM. Anomutsiva Exynos 990 anotarisirwa kunge akafanana chaizvo neQualcomm's inotevera mureza Snapdragon SoC maererano neCPU performance. Nekudaro, iyo Exynos 990 iripo haina kukanganiswa. Imhaka yekuti Exynos M5 CPU dhizaini yakanga yatopedzwa nenguva iyo chirongwa chechimiro chepakati chapera. Nezvemberi inotevera, ichave yekupedzisira Exynos SoC kuratidza yakazara tsika yeCCU cores.
Iyo Exynos 990 inogadzirwa pane Samsung's 7nm LPP maitiro, uchishandisa EUV. Maitiro ayo node ndeyekureva achibudirira kupfuura iyo Qualcomm Snapdragon 865, iyo yakavezwa pane TSMC's N7P (DUV) maitiro. (Iyo chete SoC inogadzirwa paTSMC's 7nm N7 + EUV maitiro ari HiSilicon Kirin 990 5G.) Zvisinei, iwo saizi yekufa yeExynos ichiri yakakura sezvo Exynos M5 cores yakakura kupfuura iyo ARM Cortex-A77 cores mu Snapdragon 865 .
Panyaya yekubatana, iyo Exynos 990 yakavezwa ine Samsung's 5G-inokwanisa Exynos 5G Modem 5123. Iwo akasiyana-siyana e4G emafoni ane modem yakafanana neiyo 5G kusiyanisa, asi ivo vanoshaya iyo 5G RF system, inodiwa kuti iite 5G ishande. .
Exynos 990 inoratidzira maviri Exynos M5 "mahombe" cores akawedzera pa2.7GHz, maviri AMM Cortex-A76 "yepakati" cores yakavharwa pa2.5GHz, uye mana eArM Cortex-A55 "madiki" cores akaiswa pa2GHz. Mukufananidza, iyo Snapdragon 865 ine imwe chete yeArM Cortex-A77 Prime yepamberi yakavhara pa2.84GHz, nhatu Cortex-A77 Performance cores yakavharwa pa2.42GHz, uye ina AMM Cortex-A55 cores yakaiswa pa1.8GHz.
Iwo epakati macores eExynos 990 ari kunetsekana kuita kwakashata tichienzanisa neiyo Snapdragon 865 yepakati cores, iyo yakavakirwa patsva yeArm Cortex-A77 yekuvakwa. Iwo madiki madiki anovharwa kumusoro paEpynos, nepo mahwanda akakura zvakasiyana sekuti Qualcomm inoshandisa maARM A77 cores nepo tsika Exynos M5 ndiye mutsivi weExynos M4 (Cheetah) anoshandiswa muExynos 9820 uye Exynos 9825.
The Exynos 990 inoratidzira iyo ALM itsva yeValhall-based Mali-G77MP11 GPU, uye inguva yekutanga tirikusvika kuedza izvi. Iyo GPU inokwikwidza neQualcomm's Adreno 650 GPU mu Snapdragon 865, uye zvekare, zvinotarisirwa kuve munjodzi nekukanganisa.
Panyaya yekugadzira CPU mashandiro, iyo Exynos 990 haina kukwikwidza zvakanaka neiyo Snapdragon 865. Ehe, inokurumidza zvishoma kupfuura iyo yekare Snapdragon 855, asi izvo zvinouyawo nemutengo wakakura wekushandisa. Yakabatana ne Snapdragon 865, iyo Exynos 990's Exynos M5 musimboti ine 100% simba rekushomeka kupesana neiyo Snapdragon 865's A77 yepamusoro soro, maererano AnandTech. Kunyangwe kugona kweaya yepakati A76 cores kuri kumashure kweiyo A77 yepakati cores ye Snapdragon 865. Iyo Exynos 990 haingori SoC inoshanda, kunyangwe kurwisa Snapdragon 855.
MuGeekbench 5 imwe chete-musimboti chikero, iyo Exynos 990 kusiana yeGPS S20 + yakasungirirwa kana paavhareji ingangoita mapoinzi makumi matatu pane nani pane Snapdragon mutsauko wefoni. Iyo imwe nyaya yakasiyana mune dzakawanda-musimboti zvikoro, zvakadaro, apo Snapdragon akasiyana musika, paavhareji, angangoita mazana matatu ematanho kupfuura iwo Exynos musiyano. Sezvo isu tatsanangura zvisati zvaitika, Samsung inoramba ichidzingirira yakakwirira--musimboti zvikero paGekbench kusvika pakukuvadza kwechokwadi-nyika mabhenji, uye inotungamira kumufananidzo wakashata wekuita kweSoC. Saka Exynos 30's Exynos M300 musimboti inogona kunge iri parutivi neArM Cortex-A990 iri Snapdragon 5 kuGebenbench, asi SPEC inotaura yakawedzera mufananidzo uye zviri pachena kuti iyo ARM Cortex-A77 inokurumidza mune imwe chete-musimboti, iyo iyo inotungamira kuita zvirinani kuita kwepakati.
PCMark Work 2.0 yakawedzera kana kushoma iyo bhenji chete yatinayo yekuyedza simulation yechokwadi-yepasirose yekuita sezvo ichiedza kuyedza zvinoitwa mabasa akadai sewebhu kubhurawuza, kunyora, kurongedza mifananidzo, nezvimwe. Kune nzira ina dzinogoneka dzekuedza iyo Galaxy S20 + pano. Samsung inopa yakakwira-Performance modhi mune iyo Power Mode marongedzero, ayo anomhanya kune yakakwirira system kumhanya nekukanganisa. Saka iwe unogona kana uine yakajairwa Optimized maitiro pa60Hz; Yakakwirira-Performance maitiro pa60Hz; Optimized modhiyo pa120Hz; uye yakakwira-Performance maitiro pa120Hz.
Kusaparadzaniswa muhuwandu hwehuwandu ndiko kunonyanya kuoneka kana uchienzanisa Optimized modhiyo pa60Hz kutarisana nePamusoro-Performance mode pa120Hz Musiyano weiyo chikoro ndi 17% (10,319 vs. 12,338). Kugonesa 120Hz maitiro anoita kukurudzira kukuru kune iyo Web Browsing 2.0 Scounts kunyangwe iwe usingakwanise High-Performance mode.
Chati inoratidza kusangana kwechitatu, kwandiri kumhanyisa iyo Galaxy S20 + pa120Hz modhi ine Optimized simba mode. Pano, iyo Exynos 990 chinosiyana neGlass S20 + inopa kuvandudzwa kwakatarwa pamusoro pevakatangira uye ndiyo yepamusoro svomhu. Uwandu hwacho (chiratidzo chejiometri yezvose zviduku-makora) hwakanyanya kukwirira kupfuura iyo Exynos 9820 chinosiyana neGlass S10e. Ingori 2% chete yakaderera iyo Snapdragon 865 variant's score, izvo zvakanaka kwazvo kuti uone.
Panyaya yekuputsika kwemamaki emunhu, Exynos 990 yakasiyana-siyana yefoni manhamba akanyanya kuwanda muWebhu Kubrowser 2.0 (zviri nani kupfuura Snapdragon 865), Vhidhiyo Kugadziriswa (zvishoma kuderera pane Snapdragon 865), uye Photo Editing 2.0 (yakakwirira kupfuura iyo Snapdragon 865) izikolo. Mune yekunyora 2.0 bvunzo, foni inorohwa zvese neiyo Snapdragon 865 variant pamwe nemamwe mafoni Snapdragon 855, asi mamaki achiri akakwira. Iyo Photo Editing 2.0 mucherechedzo inonyanya kushamisa sezvo iri pamusoro zvakanyanya kupfuura iyo Exynos Galaxy S10e chikero - iri chart-topping. Mucherechedzo uyu unobatsira Exynos 990 mucherechedzo parizvino ne Snapdragon 865 muhuwandu hwacho. MuDatha Manipulation mamakisi, iyo Exynos 990 iri pazasi Snapdragon 865.
Isu tinotendeukira kune Speedometer 2.0 kuyedza kuita kwewebhu. Snapdragon 865 Galaxy S20 + iri pamusoro apa, nepo Exynos 990, sezvaitarisirwa, iri kumashure chaiko. Chikamu chiri chete par paruzhinji Snapdragon 855 mafoni, ayo ari chizvarwa akura. Zvekare, izvi zvinojekesa kuti musoro-kune-musoro, iyo Exynos inouya yakaipisisa.
Mhedzisiro yeAndroBench inoratidza zvimwe zvinoshamisa zvekuchengetedza maitiro. Iyo Galaxy S20 + ichine UFS 3.0 yekuchengetedza, uye kwete iyo nyowani UFS 3.1 NAND kutaurwa, iyo inoshandiswa muIQOO 3 (kutanga kufungidzira. Kunyangwe zvakadaro, inokwanisa kutumira yakakwirira kuverenga kwakatevedzana uye akatevedzana kunyorwa manhamba ataona. Nhamba dzinoverengera kuverenga uye dzisina kunyorwa manhamba hachisi chinhu chekuzvidza, kunyangwe. Inotaridzika neGlass Note 10+, iyo Exynos Galaxy S20 + yakakurumidza NAND sezvo ese manhamba ekuita akakwira.
Iyo Mali-G77MP11 GPU yeExynos 990 ndiyo yekutanga kuve iri yakavakirwa kuArm's new Valhall architecture. Panguva yakaziviswa Exynos 990 muna Gumiguru, Samsung yaive nechero hanya nezvekuita kweGPU, ichiti ichawedzera 20% kuvandudza mashandiro avo. or masimba emagetsi pamusoro peyakafanotangira. Sezvazvinoitika, kambani iyi yakafungidzira kuwana kweGPU maererano nebasa rakakwira asi yaive yechokwadi nezvavo maererano nebasa rakaramba riripo. Izvi zviviri zvinhu zvakasiyana. Kwemapfupi akaputika, iyo Mali-G77 inokwanisa kugadzirisa nekupokana neyakatangira; asi maererano nezvekuita kwakasimba, misiyano hauna kukura. Kunyangwe mushure mekuyedza kweArmM, kambani GPU yepamusoro haigoni kukwikwidza neAdreno 650 mu Snapdragon 865. Iyo inokwanisa kurwisa hondo yeSnapdragon 855 chete nezve chekuita kwepamusoro, asi kamwe zvakare, izvo hazvifanirwe kuita. iva pfungwa yekufananidza.
Mu 3DMark Sling Shot Yakanyanyisa, iyo graphic score yeiyo Exynos 990 kusiyanisa yeGPS S20 + yakakwira kupfuura iyo Mali-G76MP12-powered Exynos Galaxy S10e, zvese zviri zviviri zveOpenGL ES 3.1 uye Vulkan. Izvo zviyero zvakaderera pane iyo Snapdragon 865 Galaxy S20 +, sezvazvinoonekwa mumabhenji marati. Zvekare zvakare, iyo fizikero scores (izvo zviyero CPU, kwete GPU mashandiro) yakaderera pane iyo makwikwi - ese ari maviri Snapdragon 865 uye Snapdragon 855 akasiyana. Uwandu hwese hweExynos 990 Galaxy S20 + hwakaderera kupfuura Adreno 650-inofambisa Snapdragon 865 Galaxy S20 + ne10% mu OpenGL ES 3.1 uye ne25% muVulkan.
Zvekare, vatengi veExynos musiyano weGPS S20 mafoni vachanyatsoita zvakanyanya kuita kweGPU kupfuura vatengi veiyo Snapdragon mutsauko.
Izvi zvinoreva kuti kana zvakare, vatengi veExynos musiyano weGreen S20 mafoni vachanyatso kutadza kuita kweGPU pane vatengi veiyo Snapdragon mutsauko. Haisi kururamisira, asi ndizvo zvave zvakadaro okungenani kubvira muna 2018.
Iko kuita kweUI pane Exynos Galaxy S20 + ingano yevaviri vakasiyana zviitiko. Mune yakasarudzika 60Hz kuratidza kuzorodza mwero, mashandiro ari kugona. Iyo yekuita yakanakisa kumbobvira yaita chero Samsung mureza maererano ne app kuvhurwa nguva uye mudziyo kusununguka, asi haisi chizvarwa chinokurumidza kupfuura 2019 mureza, kunyanya Snapdragon 855 mafoni. Muchokwadi, mafoni ane 90Hz kuzorodza mwero seyakanyanya kuita OnePlus 7 Pro inonzwika kunyorovesa kupfuura Galaxy S20 + kunze kwebhokisi, nekuti yavo yakakwirira yekuzorodza inogoneswa kunze kwebhokisi, nepo iyo Galaxy S20 + opts yekuenda neiyo standardHH. Iko hakuna wekupedzisira stutter yakadai pane iyo mose mushandisi yekushandisa, asi iyo UI animations muOne UI hainzwe nekukurumidza seiya pane OxygenOS. Iyo yekufamba inofamba zvakanaka ichiri yakanaka kune avo vashandisi vasina kuedza yakakwirira yekuzorodza ratidziro kuratidzira kusvika pari zvino kana kune avo vasina hanya nezvechinhu chakadai.
Kugonesa 120Hz maitiro anoita mutsauko mukuru, hazvo. Ndine chivimbo mukutaura kuti ne 120Hz modhi inogoneswa, iyo Exynos Galaxy S20 + ndiyo inokurumidza, yakapfava smartphone yandakamboshandisa. Iko hakuna stutters, uye mimhanzi yakasarudzika zvekuti inotsvedza inoratidzira. Ichi chiitiko chikuru tichifunga kuti mafoni aimbova sei mugore ra 2019. Iyo Galaxy S20 + inorova kunyange iyo OnePlus 7 Pro (ongorora) maererano nekusagadzikana ne120Hz zororo rekuvandudza. Ichokwadi, ini handina kushandisa mafoni seOPPO Tsvaga X2 Pro kana iyo Xiaomi Mi 10 parizvino, uye zvinogoneka kuti ivo vakakwenenzverwa kana kungoita seakagwinya seGirazi S20 +. Iyo Galaxy S20 + inoisa bha yakakwira kuyambuka, zvisinei.
Iine 120Hz modhi inogoneswa, iyo Exynos Galaxy S20 + ndiyo inokurumidza, yakapfava smartphone yandakamboshandisa. Iyo inoisa bar yakakwira kuyambuka.
Kana iwe uine hanya nezvekutsetseka kwechishandiso, saka unofanirwa kugonesa 120Hz. Ehe, inouya nemutengo wakakosha muhupenyu hwebheti. Ehe, kusave nechokwadi chinosarudzika zororo zororo iri sub-zvakakwana. Kunyangwe zvakadaro, iyo kuvandudzika mukupindurwa kwese mudziyo zvinoshamisa.
Iyo 4G yakasiyana yeGPS S20 + ine 8GB yeLPDDR5 RAM, nepo 5G yakasiyana ine 12GB. Ini handigoni kubatsira asi kufunga kuti ichi chaive chisina basa-mutengo wekucheka-chema. Android inoda yakawanda RAM yekuti ichengete zvirimo mundangariro, uyezve ipapo, zvirongwa zvinokwanisa kudzingwa mundangariro uye kuridzirwazve panguva nenguva. 12GB ye RAM, saka, inogona kuve yakauya inobatsira. Sezvazviri, 8GB ye RAM ichiri inogamuchirwa kunyangwe iri mureza, asi ini ndonzwa chiitiko chakatemwa-chakabviswa munzvimbo dzeChipo dzekutarisa uko ma tabs mazhinji anofanirwa kurazve. Iyo LPDDR5 yakatarwa inonyanya kukosha mune yemberi-inoongorora pamusoro iyo yekare LPDDR4X chiyero nekuti kunyange ichiunza kuvandudzika mundangariro bandwidth uye kugona kwemagetsi, misiyano-yehupenyu chaiyo ichave isingabviri kuona sepakutanga.
Iyo Galaxy S20 + ine Qualcomm's ultrasonic iri pasi pekuratidzira chigunwe chekunzwa, icho chinodaidzwa kuti 3D Sonic Sensor. Iyi ichiri Qualcomm yekutanga-chizvarwa sensor uye kwete itsva, yechipiri-chizvarwa sensor (3D Sonic Max), izvo zvakaziviswa muna Zvita. Iyo senser nyowani yaive nenzvimbo yakakura kakapetwa kagumi nematanhatu (17 mm x 20 mm vs. 30 mm x 4 mm yeiyo yekutanga-chizvarwa sensor) nekumhanya kumwechete, uye zvakatobvumidza zvigunwe zviviri kunyorwa kamwechete. Nekudaro, hazvina kupera muGlass S9 yakatevedzana. Zvimwe ingangove isina kugadzirira munguva. Chero zvazvingave zvakadaro, iko kusunungura ruzivo pane iyo Galaxy S20 + zvinoodza mwoyo. Iyo sensor inoda kudzvinyirirwa kushoma pane yekupenya-pasi pekuratidzira chigunwe sensor, iyo huru yekuwedzera pfungwa - pombi yemwenje inogona kuita basa kana chigunwe chakanyoreswa nenzira kwayo (uye kana iyo system inonzwa sekushanda). Zvimwezve zvinongedzo zvinosanganisira izvo zvakasikwa-pane zvakasikwa, uye zvakangwara zvakachengetedzeka kupfuura iko kwekunzwa sensor zvakare (asi izvo haiwanzo shandura nenzira kwayo muhupenyu hunoshanda).
Kune rimwe divi, chakakura chisiri chavo ndechekuti hachina kuvimbika uye chakaringana seazvino oparesheni Optical sensors. Zvinotora pasi pesekondi kuti usunungure, asi panogona kuramba paine zvakawanda zvakundikana kuedza sezvo iyo yekusarudzika ingangoita 75-80%. Iyo sensors pane OnePlus 7 Pro uye iyo OPPO Reno 10x Zoom (ongorora), kune rumwe rutivi, ive ne 95% yekurongeka, izvo zvinoita kuti zvive nani zvakanyanya. Samsung ndiyo chete mutengesi anoenda neQualcomm's ultrasonic sensors, uye ndinofanira kushamisika kana zvakakodzera iko. Iyo 3D kumeso kwechiso yekuziva system ingadai yakauya inobatsira, zvakare, asi ingadai yakakonzera rakakura notch kana piritsi-dhizaini kuratidza cutout (iyo nyowani Huawei P40 Pro inoratidza nzira yekumberi yakachengeteka 3D uso kuvhurwa). Pakupedzisira, kuenda neimwe yeatsva chaiwo ma sensor sensors kubva kuGoodix kwaigona kunge kuri sarudzo iri nani kune Samsung, sezvo iyo sensor ultrasonic inogona kuramba ichishungurudza kushandisa dzimwe nguva.
Iyo yekurisa yeExynos Galaxy S20 + yakanaka muchina, asi foni ichiri kupisa kuzadza kupfuura Snapdragon 855 mireza senge OPPO Reno 10x Zoom. Kupisa haisi nyaya pane dzakawanda nguva, kuve akanaka, uye iyo Galaxy S20 yekudziya mhinduro iri kumusoro kukwenya kana zvasvika pakachengetedzwa kweCPU performance. Ndakaedza CPU throttling kushandisa CPU Throttling Test's bhenji, uye CPU yakafutunurwa kusvika 85% yekuzara kwayo mushure mekuedzwa kwemaminitsi gumi nemashanu, iri mhedzisiro yakanaka. Nechemumoyo, kuwanda kweGirazi S15 + haina kunyanyo shandiswa mukushandiswa chaiko- nyika - kunyangwe foni inopisa mushure mekushandisa zvakanyanya kamera uye kana ichiita inorema multitasking.
Iyo 120Hz modhi zvine chinangwa uye inozvigadzirisa inoita kuti ive imwe ye ari inokurumidza, yakanyorova mureza mahareji pamusika.
Pakazara, iyo Exynos Galaxy S20 + ine-yakanyanya-yakagadziriswa chaiyo-yepasirese performance. Iyo inopisa zvishoma kupfuura iyo Exynos Galaxy S10e, uye haina chero inoputika stutters, kunyangwe mune 60Hz maitiro. Iyo 120Hz modhi zvine chinangwa uye inozvigadzirisa inoita kuti ive imwe ye ari inokurumidza, yakanyorova mureza mahareji pamusika. Nekudaro, mhata dzisina kunaka dzakadai sekusavimbika kweiyo ultrasonic chigunwe chekunzwa dhizaira pasi pasi uwandu hwese apa.
Samsung Galaxy S20 + - Kamera Image Samples
Tichave tichinyatsotarisa iyo Galaxy S20 + 's kamera mune yekutevera yekudzokorora chinyorwa. Zvichakadaro, heano mamwe samples kubva kune yedu unit. Ziva kuti samples idzi dzakatorwa pamberi peiyo kuburitswa kwekamera-inotarisana nekuvandudza (ATCH), kureva paATBM kuvaka.
Iyo Samsung Galaxy S20 inoteedzera svetuka kunze kwe3.5mm musoro wefoni jack. Ndakaongorora chikonzero chekubviswa uku mukati chinyorwa chakaparadzana. Muchidimbu, hachisi sarudzo yakanaka yesarudzo yemutengi uye nyore. Musika unogona, nehukuru, ungaratidzika kunge wakabvuma mafoni ekuremekedza asina 3.5mm musoro wejaketi, asi izvo hazvireve kuti mahedhifoni ehukama haafarirwi neruzhinji rwevatengi venharembozha. Chero zvazvingaitika, mamiriro ese ezvinhu ari kungoshungurudza zvakanyanya sezvo vashoma vashoma vatengesi vanotengesa mafoni ekuremekedza nemusoro jacks futi. Sony yakadzosa chinzvimbo chayo gore rino ne Sony Xperia 1 II, zvakadaro, uye inzira yandinoshuva kuti Samsung ingatevedzera mune ramangwana.
Iyo Galaxy S20 + inotenda inotsigira modhiyo yekuwanika ye USB Type-C doko, ichirega iyo foni igamuchire ese anoshanda uye anoteerera adap. Izvi zvinoreva kuti foni ichine DAC, kusiyana neiyo Google Pixel inoda chena inoshanda adapt. Subjentially, wired USB Type-C odhiyo kubva ku Samsung's AKG-tuned nhare yaive kure zvakanyanya kune ini. Ini ndaona kuti izvi ndizvo zvazviri neiyo Samsung yekare AKG-yakarongedzwa mhete dze3.5mmmm zvekare, saka vashandisi vanofanira kungozvitengera nhare dzega dzisina waya. Ini handina kuwana mukana wekuedza iyo Galaxy Buds + nefoni.
Unhu hweputauri paGirazi S20 +, kune rumwe rutivi, rwakanaka sezvakamboita. Samsung ine ichi chakafukidzwa kubvira kuGlobal S10, uye hapana zvinoshamisira zvisingashamisi zvinowanikwa pano. Matauri e-stereo anopa ruzha musinga tsanangurike, uye huwandu hwehoriyamu zvakare hwakakwirira zvinogamuchirika.
Samsung Galaxy S20 + - Software
Iyo Samsung Galaxy S20 + yakagadzirirwa neUni UI 2.1 pamusoro peGoogle 10. Kuti utarise pfungwa dzako nezve Imwe UI, verenga yedu yekutanga Imwe yeUI ongororo uye software software yedu Galaxy S10e ongororo. Kuti uzive zvakawanda nezveMumwe UI 2.0-yakataridzika maficha, tarisa chikamu che software cheGirazi yedu S10 Dzokororo ongororo.
Rondedzero yezvinhu zvitsva zvinounzwa neUU 2.1 imwe yakakura chaizvo. Izvozvi zvave kutakurwa kunze sekuvandudza yeGland S10 yakateedzana pamwe neGirazi Yekucherekedza 10 nhevedzano. Izvo zvitsva zvinosanganisira Kurumidza Kugovera, iri Samsung inokwikwidza kuApple's AirDrop. Zvimwewo zvinosanganisira iri nani sitokisi khibhodi neakawanda kutapurirana uye zvinyorwa undo / redo rutsigiro, Mimhanzi Kugovana, Pro Vhidhiyo mune kamera kamera, uye Single Tora, chinova chiri chihwitsi. Mifananidzo yakafanana ikozvino yakakamurwa pamwe chete mu Samsung Gallery app, Google Duo yekubatanidza iripo mune dialer uye Samsung Messages app, bhatani rakatemwa simba bhatani riripo mune yekuzivisa menyu (seiyi kiyi yeparutivi yakagadzirirwa yeBixby nekukasira), uye vashandisi vanogona kurekodha nguva-inopera vhidhiyo manheru. Zvakare, Android 10 mavesheni pakupedzisira tichashanda mune yechitatu-bato kutanga mune inotevera Imwe UI 2.5 yekuvandudza.
Imwe UI ndeimwe yezvakanyanya-hupfumi uye yakanyatsogadziriswa tsika tsika mushandisi.
Nechekure, Imwe UI ndeimwe yezvakanyanya-kupfuma uye yakanyatsogadziriswa tsika inoenderana mushandisi. Yayo tarisiro pane imwe-ruoko kusakura uye inonakidza typography inoenderera mberi kuve yakanaka kunyangwe gore rapfuura kusvitswa.
Samsung Galaxy S20 + - Bhatiri Hupenyu uye Kubhadharisa
Iyo Samsung Galaxy S20 + inofambiswa ne4,500 4,370mAh (yakajairika) / 990mAh (shoma) bhatiri. Iri bhatiri hombe maererano nehuwandu, asi zvakaenzana, rinofanira kuchengetwa mupfungwa kuti Exynos 5's Exynos MXNUMX cores vane 100% simba rekushomeka simba kurwisa Snapdragon 865's ARM Cortex-A77 cores. Iyo A76 yepakati cores zvakare ine hwakawanda hwakaderera simba simba zvichienzaniswa Snapdragon 865's A77 yepakati cores. Zvadaro, isu tine Samsung sarudzo yemahara 120Hz kuiswa, iyo iri mune nascent nhanho uye iyo ichiri kuda basa. Haisi yekubheka yehupenyu hwakanakisa hwebheti, uye zvinosuruvarisa, iyi inzvimbo imwechete iyo iyo S20 SXNUMX + inokundikana kuita zvakare sezvainofanirwa kunge iri mureza.
Mune default 60Hz maitiro, iyo Galaxy S20 + inowanzogara zuva rakazara rekushandisa mune kwangu ruzivo. Screen-on nguva inogona kubva pamashanu kusvika maawa mashanu kusvika maawa matanhatu, izvo zvisiri kuratidza kwakanakisa kune 5.5 6mAh bhatiri yekugona. Izvi zvinogona zvakare kunongedzera kune kusakosha kweExpynos 4,500. Patinogonesa 990Hz, hupenyu hwebhatiri hunodonha zvakanyanya. Panguva iyoyo, zvakanaka kutaura kuti iyo 120mAh bhatiri yakakura inozvibata senge 4,500mAh bhatiri maererano nehupenyu. Dhayeti inogona kucherechedzwa muye-chaiyo-nguva, kusvika pachinzvimbo chekuti screen-on nguva nhamba inodonha kusvika panosvika 3,300-4.5 maawa. Iwe unozonetseka kuti uwane iyo foni kuti igare anopfuura maawa makumi maviri nemana pamubhadharo mumwe chete nemaawa 5-24 ekushandisa.
Mukuenzanisa nehama, mafoni senge OPPO Reno 10x Zoom neiyo Huawei P30 Pro inopa zvakawanda, zvirinani hupenyu hwebhatiri. Hupenyu hwebhatiri yeOnePlus 7 Pro ine 90Hz maitiro uye QHD + kugadziriswa kunoenzaniswa. Nechizvarwa-chitsva chip, iyo Galaxy S20 + inopa hupenyu hwebhatiri inoodza mwoyo mu 120Hz modhi. Hupenyu hwebhatiri pa120Hz hwakaipa kupfuura hupenyu hwebhatiri yeGlass 10 9810 Lite, uye iyo foni chaiyo inofambiswa neisina kukwana, ane makore maviri Exynos 20 SoC. Kunyangwe iyo isina chinhu dhayeti paGirazi SXNUMX + haina kunaka sezvainofanirwa kunge iri, sezvo iri pasi pevatengesi vakaita seOPPO neOnePlus. Zvakanaka kutaura kuti Samsung ine dambudziko pano, uye iyo kambani inofanirwa kugadzirisa hupenyu hwebheja hwefoni mune yekudzokorora mune yemberi.
Iyo Galaxy S20 + inotsigira 25W Super Fast Charging uchishandisa USB-C PD 3.0 nePPS uye PDO rutsigiro. Yechitatu-mubato wepamusoro-kukurumidza kuchaja kuchiri kungobvumidzwa sezvo izvo zvinodikanwa zvakanyanyisa chaizvo. Kana iwe usingashandisi Super Fast Charger, iyo inokurumidza kuchaja pafoni inogumira kune 15W kwete 18W. Kusiyana neGlass S20 Ultra uye Galaxy Cherechedzo 10+, iyo Galaxy S20 + haitsigire 45W kuchaja. Izvi hazviiti musiyano wakakura maererano nenguva yekuchaja, sezvo mafoni aya achamira kuburitsa 45W yemagetsi kana asvika 30% bhatiri. Zvinotora inoda kusvika awa imwe kuti Galaxy S20 + ibhadharwe kubva pa20% kusvika 100%. Nguva yekuchaja inogamuchirwa mukati mayo. Proprietary yekuchaja zviyero senge OPPO's SuperVOOC 2.0 (hwaro hweReal's Dart Charging) inokurumidza zvakanyanya pamutengo wekuparadzanisa charger.
Runhare runotsigira Samsung's Fast Wireless Charging 2.0 pa15W, uye zvakare, kumhanya uku kuri kudonha kuseri kwekushambadzira kwemuchina wekukurumidza waya isina kubhadharwa kunoitwa nevamwe vatengesi, ayo anogona kukwira kusvika ku30W. Wireless PowerShare (inodzorera isina waya yekuchaja) inotsigirwa zvakare kuchaja nharembozha isina waya kana smartwatches, uye inotsigira 9W yesimba.
Iyo Samsung Galaxy S20 + ine yakanaka yekugamuchira cellular chiratidzo uye yekufona mhando, sezvaitarisirwa. Iyo inotsigira maviri VoLTE. VoWiFi inotsigirwa yevashandisi veJio neAirtel muIndia. Foni inotsigirawo mbiri-frequency GNSS yekunaka nzvimbo yekutevera, ichiita yekutanga Samsung mureza kuve neichi chimiro.
Iyo foni yefoni vibration mota ndeimwe yayo yakanyanya kukwidziridzwa. Iyi ndiyo yekutanga Samsung foni inopa inoenzanirana haptics uye yakafanana typing chiitiko kumafoni akaita seMumwePlus 7 Pro uye iyo OPPO Reno 10x Zoom. Yakanyanya nani kupfuura iyo S10e, asi haisati yakanyanya-mukirasi seReno 10x Zoom inopa zvishoma zviri nani vibrate chiitiko.
Inguva yakaipa kutenga parizvino foni, regai nditsike runhare runodhura seSamsung Samsung S20 +. Denda reCCID-19 ririkuenderera mberi rakonzera kukiya kwakazara muIndia nedzimwe nyika dzakawanda pasi rese, uye kutenga smartphone nyowani haisi basa rakakosha. Sezvo e-commerce mapuratifomu akamiswa, ndizvo zvakaitawo kutengesa kwefoni. Vanokwidza kutenga vatengi veGPS S20 vanofanirwa kumirira vhiki shoma kuti vatenge.
Ndicho chikonzero nei tiri kuparadzanisa yedu kamera ongororo kubva wongororo iyi. Iwo makamera ndiyo huru yekutengesa nzvimbo yeGPS S20 +. Ini ndamboedza kamera yangu kuyedza neyemberi ATBM yekuvandudza, asi Samsung yakabva yatumira itsva kamera firmware ne "yakagadziriswa kamera kuita" sechikamu chekuvandudza kweATCH. Nekuda kwekuvhara, isu hatingakwanise kuyedza zvekare kamera mufananidzo weiyo kamera pane ATCH yekugadzirisa kusvikira yapera. Kune yedu ongororo yefoni yemhando yemhando yepamusoro pamberi peATCH yekuvandudza, gara wakasarudzika yedu iri kuuya kamera kuongorora.
Iyo Samsung Galaxy S20 + runhare rwakanyanya. Panyaya yekugoverana kwepfungwa, inogona kuve yakafukidzirwa neiyo yepamusoro-yekupedzisira Galaxy S20 Ultra, asi izvo zvingave zvisina kunaka nezvayo. Imhaka yekuti inogona kumira pachezvayo chaicho. Makamera ayo ane masimba akasiyana. Foni inopa yakanakisa kuratidza mhando, yakanaka chaiyo-yenyika kuita, yekirasi-inotungamira kifaa kusheedzera pamwe neasarudzo 120Hz modhi, yakajairwa huru makamera ane yakajeka mufananidzo mhando mumamiriro akawanda, chimiro-chakapfuma mushandisi chinongedzo, uye dhizaini inofadza nehukuru ergonomics. Iyo ine zvimwe zvinoonekera zvakasarudzika senge zvisingasviki stellar hupenyu hwebhatiri, zvine simba nekukanganiswa kwemagetsi kweiyo 120Hz modhi, kusarudzika kwekuita basa kweEexynos 990 SoC, uye (kazhinji) kunhuhwirira kwepigingi yemunwe. Pakazara, zvakajeka kuona kuti kune vatengesi vefoni vanoratidzira, rondedzero yayo yezvipostori inodarika iyi rondedzero yezvakaipa.
Iyo Galaxy S20 + inodhura ₹ 73,999 ($ ​​988) muIndia kune yega 8GB RAM / 128GB yekuchengetedza akasiyana.
The post Samsung Galaxy S20 + Ongororo: Iwo akajairwa anotakura mureza mureza yakatanga kutanga xda-vatadzi.
Samsung Galaxy S20 ongororo: Yakachipa uye yakanyanya kunaka
Samsung Galaxy S20 FE Ongororo Yenguva Refu